Guriceel Archives - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Home Tags Guriceel
Faahfaahin: Dagaal Guriceel ku dhex maray Booliska Galmudug iyo Ciidamada Milateriga Gorgor
Macalin Maxamud: “Ahlu Suna Guriceel way u dhowdahay, ciddii nasoo weerartana waan iska celineynaa”
Qoorqoor oo jawaab kulul siiyay Axmed Fiqi. “Dadkuna ku arag, Galmudug-na waxba uma dhimi kartid”
“Magaalada Guriceel waxaa lagu dunshay Hub iyo ciidan Muqdisho laga keenay..” Qormada Sh. Shaakir
Maxaa lagu arkay dhufeysyadii Aaggii Jaamacadda Guriceel ee ay ka baxeen Ahlu Suna..?
Ahlu Suna oo ka baxday Guriceel (Halkee ayay ku danbeeyaan Sheekh Shaakir iyo ciidankiisii..?)
Beesha Caalamka oo dalbatay in si degdega loo joojiyo Dagaalka Guriceel (War-saxaafadeed)
Mareykanka oo ka fiirsanaya taageerada uu siiyo Ciidamada Danab, kadib dagaalka Guriceel
Madaxweyne Qoorqoor: “Galmudug ma aqbaleyso Qori Caaradiis in lagu raadiyo damac shaqsi iyo kuraas…”
Xaaladda Guriceel oo maanta ka duwan sidii hore: Ma lasoo afjari doonaa Dagaalka Ahlu suna..?
Dagaalka Guriceel: Ahlu-suna oo Jilibka aasatay iyo Madaafiic ay dalbadeen ciidamada Dowladda
Dagaalka Guriceel: Ahlu Suna oo dhinac loo riixay iyo Taliye Odowaa oo gaaray Aagga hore